China Magnesium Nitrate factory sy mpamatsy | Lemandou
Ny magnesium dia sakafo mahavelona amin'ny fitomboan'ny zavamaniry mahasalama. Izy io dia singa iray lehibe ao amin'ny molekiola klorofila, noho izany dia ilaina amin'ny fotosintesis sy ny fananganana gliosida. Ny magnesium dia voarohirohy amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny anzima ary manampy amin'ny famokarana angovo. Ny tsy fahampian'ny manezioma dia mampijanona ny fivoaran'ny zavamaniry, ka mihena ny vokatra ary tsy tsara kalitao.
Ny zavamaniry dia mandray tsara kokoa ny manezioma avy amin'ny Magnesium Nitrate mora kokoa, noho ny fifandraisan'ny magnesium sy ny anion nitrate. Magnesium Nitrate dia mahomby hatramin'ny telo heny noho ny solifara manezioma amin'ny fisorohana sy fanasitranana ny tsy fahampiana magnesium, ary amin'izany dia mamela ny tahan'ny fampiharana ambany kokoa.
Manezioma oksida (toy ny MgO)%
Misoroka sy manasitrana ny tsy fahampiana maneziôma
Misy otrikaina zavamaniry 100%
Tsy misy klôroida, sodium ary singa manimba hafa
Matetika haingana sy tanteraka anaty rano
Mety ho an'ny fampiharana mahomby amin'ny alàlan'ny fambolena sy ny famaohana
Foliar spray dia fitaovana mahomby hamenoana sy hanatsara ny sakafo mahavelona ny zavamaniry.
Rehefa mikorontana ny fidiran'ny otrikaina avy amin'ny tany, ny fampiharana ravina Magnesium Nitrate dia manome ny manezioma ilaina amin'ny fampandrosoana ara-dalàna ny voly.
Raha ilaina ny fanitsiana haingana ny tsy fahampian'ny manezioma, dia amporisihina ny fampiharana ravina ravina, satria haingana be ny fandraisana ny maneziôma amin'ny ravina.
Arotsaho anaty rano kely ny manezioma manezioma ary ampidiro amin'ny tanky famafazana. Rehefa mihatra amin'ny mpiaro ny voly dia tsy ilaina ny manampy ny mando. Mba hahazoana antoka fa mifanentana ireo singa mifangaro-tanky dia manaova fitsapana kely alohan'ny tena fampiharana.
Mba hanamarinana ny fiarovana ny taha naroso amin'ny toe-javatra misy eo an-toerana sy ho an'ny karazana manokana dia asaina manafotra an'ireo sampana na zavamaniry vitsivitsy. Aorian'ny 3-4 andro, zahao ny teti-dratsy nosedraina mba hahitana soritr'aretina mahamay.
Previous: Nitrate potasioma
Manaraka: Calcium Nitrate Granular + B